I-EDO: Ukukala Ukuzibandakanya Kwabathengi Ekukhangisweni Kwe-TV | Martech Zone
ULwesithathu, April 8, 2020 ULwesithathu, April 8, 2020 Douglas Karr
Lapho abantu bexoxa ngokukhangisa kwedijithali, bavame ukushiya iziteshi zendabuko zokusakaza ezifana nethelevishini nomsakazo. Kepha inkampani yokusakaza izolo ayisekho nje ukusakaza… Bathwebula amamethrikhi wokuzibandakanya nokusetshenziswa kwehle kuze kufike kwesesibili. Konke ukuxhumana okwenzayo kusilawuli kude sakho kuyarekhodwa ukuze kuthuthukiswe kangcono izinhlelo nokubhekisa ukukhangisa. Lokho okwake kwaba yinzuzo yezinsizakalo zokusakaza zesimanje manje sekufakwa ekukhangisweni kwendabuko kwethelevishini.
Izindlela ezingcono zokubamba inhloso yokuthenga ukuvumelanisa izikhangiso zethelevishini nesikrini sesibili ukusesha okuphilayo. Umthengi ubuka ukuhweba bese wenza ukusesha kwento kudivayisi yakhe ephathekayo noma ithebhulethi. Inkampani eyodwa ehola indlela yokuqondanisa lokhu kuthengiselana Edo. Abathengi nabathengisi bokukhangisa kwe-TV bathembele kwidatha yabo ukukala ukuthi ama-airings abo kazwelonke e-TV aqhuba kanjani abathengi ekukhangiseni kwabo nasekuthengeni imingcele. Bakuqinisekisile kaningi ukuthi ukuzibandakanya kwabathengi kuveza inhloso yokuthenga. Babiza ubuchwepheshe Ukuzibandakanya.
Ukuzibandakanya kosesho kwenzeka lapho umthengi eguquka kusuka ku- umamukeli ongenzi lutho yemiyalezo ku umhlanganyeli osebenzayo kunqubo yokuthenga ngokusesha ku-inthanethi kokunikezwa ngumkhangisi. Ngokuqondanisa kahle ukusakazwa kwezikhangiso nomsebenzi wosesho, i-EDO isiza abakhangisi ukuqondisa abathengi ngempumelelo ngemingcele yabo yokuthengisa kuze kube seqophelweni lokuthengiselana.
Ukuzibandakanya Kwokusesha: Umzuzu Weqiniso
Isebenza kanjani i-TV Ad Engagement:
I-EDO ilinganisa ukuzibandakanya kosesho lwabathengi kumikhiqizo yonke emikhulu nemikhiqizo, kuthwebula idatha eyimbudumbudu eyenele ukubeka ngqo ukubandakanyeka kwabathengi ekushayweni kwezikhangiso ezithile ze-TV.
Ukudweba kusethi ye-EDO yomlando wesikhangiso (i-TV Ad Database) Ithimba labo lesayensi yedatha lithuthukisa amasu wezibalo avula ukuqonda okunengqondo kwabathengi nabathengisi.
Amaklayenti asebenzisa le mininingwane ukukala ukusebenza kokudala kwabo, abezindaba be-TV, imikhankaso ye-TV, kanye nemizamo yabancintisana nabo.
Ochwepheshe be-EDO basebenzisana namakhasimende ukuphenya imibuzo eyinkimbinkimbi yokwandisa nokwenza ngcono imikhankaso yesikhathi esizayo ngokuhlukanisa izimfanelo ze-TV ezisebenza kakhulu ekushayeleni i-Search Engagement.
I-EDO iqondanisa ukukhangisa kwethelevishini futhi iyivumelanise nedatha yosesho engu-24/7 ngaphandle kwesidingo sohlolo lomkhankaso wangaphambi kokuthunyelwe. Nge-EDO, izinkampani zinga:
Linganisa ukuthi umkhankaso wakho we-TV usebenza kanjani - Kala ukuthi umkhankaso wakho usebenza kanjani ngokuqhathaniswa nemikhankaso eyedlule, nokuthi ngabe uthola isabelo esanele se-Search Engagement Linganisa ukusebenza kwesikhangiso sakho kumicimbi ebukhoma nanoma yikuphi ukuhlanganiswa okuxhasile.
Thuthukisa okudaliwe ngesikhathi sangempela - Yenza ukuhlolwa kwe-A / B bukhoma kokudala kwakho ku-TV ngaphandle komsebenzi owengeziwe noma ukulungiselela. Hlola ukubandakanyeka kwabathengi ngendlela ngayinye, bese uthuthukisa uhlelo lwakho lokudala nokujikeleza.
Yazi ukuthi imidiya yakho ishayela kuphi ukuzibandakanya komkhiqizo - Zero in kumanethiwekhi, imibukiso, noma ama-dayparts aqhuba ukubandakanyeka komkhiqizo okukhulu kakhulu, bese ufaka idatha yezindleko ukuveza i-ROI.
Ibhentshimakhi ngokumelene nemikhankaso yabancintisana - Qonda lapho kusebenza khona imikhankaso yabanye ukuze ukwazi ukuncintisana ngempumelelo enkulu. Idatha ye-EDO ihlanganiswe ngokuphelele futhi ayidingi lwazi lwamakhasimende angasese.
Thepha ochwepheshe be-EDO ngokuhlola okujulile - Ithimba labo lizokusiza ukuba uhlukanise futhi uhlaziye inani elihambisanayo lanoma iyiphi imfanelo yezikhangiso ezihlukile ze-TV. Qonda umthelela wezinketho ozenzayo ezifana nefomethi yesikhangiso, ubude besikhangiso, amasegmenti wangokwezifiso, noma ukuhlanganiswa, nokubekwa ngaphakathi kwesegmenti yezentengiso.
Cela i-EDO Demo
Tags: Izimaketheinhloso yokuthengaithelevishiniukukhangisa kwe-tv